Fandraisana - Baobab Tree Hotel & Spa
Fisakafoanana sy Fialana hetaheta
HOTELY ANISAN'NY RAITRAINDRINDRA ETO MADAGASIKARA
Misokatra ho anao ny varavaran’ny Baobab Tree Hôtel & Spa Majunga mba anomezana fahafaham-po ny rehetra. Trano fandraisam-bahiny manana ny maha izy azy sy raitra natokana ho an’ireo mpizahan-tany, fialan-tsasatra miaraka amin’ny fianakaviana, fivoriana miaraka amin’ny mpiara-miasa, mariazy sy vody ondry, seminera… sns
Ireo efitrano fatoriana
Fisakafoanana & Fialana hetaheta
Mampalaza an’i Madagasikara ny fanomezany lanja ny hay fy. Arak’izany, ny Baobab Tree Hôtel & Spa dia afaka manome fahafam-po anao amin’ny fomba fahandro malagsy vita eto an-toerana sy ny fomba fahandro nentim-paharazana malagasy.
Ny momba ny trano fisakafohanana
Ny trano fandraisam-bahiny Baobad Tree Hôtel & Spa Mahajanga dia toerana miavaka, fakana sasatra, fakana aina. Ahitana dobo filomanosana ao anatin’ny hotely ary ahitana ihany koa ny fodian’ny masoandro izay anamarika ny fitsidihanao ny hotely.
Fanatanjahantena & fialam-boly
Ho an’ireo izay mpankafia fanatanjahatena dia manana toerana manokana afaka anaovanao an’izany izahay.
Misy dobo filomanosana koa izay ahafahanao manohiy ny kotrana isan’andro amin’ny rafitra manara-penitra.
Misy efitrano malalaka izay afaka anaovana kilalao sy fialam-boly maro isan-karazany na ho an’ankizy na ho an’ny olon-dehibe ato amin’ny hotely.
Ao koa ny fialam-boly maro samiaha mety tsara ho an’ny tanora izay misokatra isan’andro isan’andro.
Mariazy & Fanasana
Arak’izany rehetra izany, dia mbola misy ihany koa ny efitrano malalaka afaka andraisana ny lanonam-panambadiana izay kasahinao ho tanterahina.
Mba ahazoanao fahafaham-po dia ankininao tanteraka aminay ny fanatanterahana an’izany rehetra izany.
Betsaka amin’ireo olo malazo no efa nisafidy an’i Madagasikara mba anatanterahana ny volan-tanteliny.
Ianareo koa, afaka mankalaza izany amin’ny sehatra meva. Avaratra andrefan’ny nosy Madagasikara no misy azy ary eo akaikin’ny tatatran’ny Mozambika.
Mandritra ny fotoam-pialana sasatra dia ho itanao isank’ariva ny fodian’ny masoandro
Ny Baobab Tree Hôtel & Spa dia manana efitrano malalaka afaka andraisana ireo fivoriana arak’asa samihafa na seminera lehibe. Misokatra malalaka koa ny efitrano fisakafohanana sy ireo fialam-boly maro isan-karazany.
Madagasikara dia manana harena voajanahary ary manana ny mampiavaka azy raha mitaha amin’ny firenena hafa. Tsy dia lavitra ny trano fandraisam-bahiny akory dia afaka ho entinay mizaha ireo karazana gidro, tanalahy, sy ireo vorona tsy dia fahita firy ianao ato amin’ny faritra Boeny. Misy fitsangatsanganana afaka ahitanao ireo trozona, sy karazana hazan-dranomasina koa.
Aza adino ny zava-drehetra, araho amin'ny tambajotra
La Corniche Boulevard Marcoz
B.P. 522, Mahajanga 401, Madagascar
+261 (0)20 62 241 72 – +261 (0)34 44 200 10/12
© 2020 Baobab Tree Hotel & Spa All rights reserved - by Orion Digital Business - Iaina Randrianarivony